Judo - Afrika U-19 : Tafara-dalana tamin’ireo Alzerianina i Marius Viser
Ny filohan’ny federasiona iraisam-pirenena : Marius L. Vizer...
Manomboka mihatonga tsikelikely ireo fiankaviamben’ny judo hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo amin’ny sokajy latsaky ny 19 taona, izay hatao eto amintsika amin’ny 22-24 jolay ho avy izao.
Niara-nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina, ny alatsinainy alim-be ny filohan’ny federasiona iraisam-pirenena (Marius L. Vizer) sy ny fiohan’ny Kaonfederasiona Afrikanina (General Lassana Palenfo) ary ireo delegasiona alzerianina hiatrika izany . efa nialoha azy ireo tamin’ny fiafaran’ny herinandro teo ireo fitaovana nomen’ny federasiona iraisam-pirenena ho an’i Madagasikara hanomana io hetsika afrikanina avo lenta eny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena io.
« Ny fanampiana an’i Madagasikara dia mandeha ara-dalàna amin’izao fotoana. Marika iray amin’ny fahamatoran’ny fitantananareo ny taranja ny fahatongavako eto », hoy i Marius L. Vizer, filohan’ny federasiona iraisam-pirenen’ny Judo. « Tokony tany Lybie no nanaovana azy io, saingy noho ny krizy misy any amin’izy ireo dia nafindra teto Madagasikara. Tsy tokony hipoka aty amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena ny krizy politika », hoy ihany izy.
Delegasiona misy olona 18 no mandrafitra ny ekipa alzerianina. Izy ireo no tonga voalohany amin’ireo firenena 14 handray anjara amin’io fifaninanana faran-tampony eto Afrika io. Efa ho avy tsikelikely koa ireo delegasiona hanatrika izany.